Heerkulbeegyada ugu fiican quraaradda, oo ah midka ugu kalsoon? | Ee kalluunka
Heerkulbeegga kuleyliyaha waa aalad aasaasi ah oo gacan ka geysata in heerkulka quraaradda si buuxda loo xakameeyo. Markaa waxaan ku ogaan karnaa jaleecada hore haddii biyuhu aysan wada kululayn, ama qabow oo dhan, inay tahay, wax aad u muhiim ah haddii aan rabno inaan kalluunkeenna ka dhigno mid caafimaad qaba oo aan walwal lahayn.
Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaan su'aalo badan ka qabno: nooca noocee ah ayaa ugu fiican? Maxay tahay in la tixgeliyo marka la dhejinaayo? Waa kuwee kiisaska ay khasab ku tahay in la helo heerkulbeegga quraaradda? Waxaan ka jawaabi doonnaa su'aalahan hoos. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkan la xiriira heerkulka ugu habboon kalluunka kulaylaha biyaha macaan.
1 Heerkulbeegyada ugu fiican aquariums -ka
2 Ma ku habboon tahay in heerkulbeeg lagu dhex yeesho quraaradda?
3 Noocyada heerkulbeegga quraaradda
3.4 Ee Cristal
3.5 Koob koob
3.7 Kuleyliyaha biyaha oo leh heerkulbeeg ku dhex jira
4 Waa kuwee kiisaska lagu cabbiro heerkulbeegga quraaradda?
5 Sida si sax ah loogu dhigo heerkulbeegga quraaradda si ay u noqoto mid la isku hallayn karo
6 Maxaa dhacaya haddii heerkulbeegga quraaradda jabo
Heerkulbeegyada ugu fiican aquariums -ka
Heerkulbeegga laba-geesoodka ah ee wakhtiga firaaqada
Heerkulbeegga Cabbiraadda ...
ZHITING Heerkulbeegga LCD ...
Ma ku habboon tahay in heerkulbeeg lagu dhex yeesho quraaradda?
Heerkulbeegga kuleyliyaha mar walba waa fikrad wanaagsan, oo ma aha oo kaliya xaaladaha biyo -biyoodka kulaylaha, oo u baahan heerkul sarreeya, laakiin dhammaan noocyada aquariums -ka. Heerkulbeegga, Adiga oo kuu oggolaanaya inaad la socoto heerkulka biyaha, waxay kaa caawineysaa inaad aragto haddii heerkulku is -beddelaayo waqtiyo kala duwan oo maalintii ah, ama xitaa si loo ogaado dhibaatooyinka suurtagalka ah ee heerkulka biyaha ee ay tahay inaad xalliso si kalluunkaaga iyo dhirtaadu had iyo jeer u helaan caafimaad wanaagsan.
Waa sidaas nidaamka deegaanka ee quraaradda waa shay aad u jilicsan, oo u baahan heerkul deggan si aysan wax walba cadaabta u galin. Isbeddellada heerkulka, tusaale ahaan, waxay kalluunkaaga ka dhigi kartaa mid jiran, maadaama isbeddel kasta oo biyaha ah uu yahay isha ugu weyn ee walaaca iyaga. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad haysato aaladdan, si aad awood ugu yeelatid inaad hubiso xogta dhowr jeer maalintii (gaar ahaan haddii aad beddeshay biyaha haanta ama cuntada ka dib), si aad waqti kasta u ogaato xaaladdiisa.
Noocyada heerkulbeegga quraaradda
Waxaa ka mid ah heerkulbeegyada loogu talagalay aquariums -ka waxaa jira xulashooyin kala duwan, mid walibana wuxuu leeyahay faa’iido iyo qasaaro, sida aan hoos ku arki doonno:
Heerkulbeegyada gudaha, sida magacu tilmaamayo, waxaa lagu meeleeyaa gudaha quraaradda, taas oo u oggolaanaysa akhrinta biyaha oo aad sax u ah. Sidoo kale, haddii aad leedahay hawo -biyood aad u ballaaran, waxaad isticmaali kartaa dhowr mar markiiba si aad u hubiso in dhammaan biyaha ay isku heer yihiin. Waxay u muuqdaan inay aad u jaban yihiin waxaana jira noocyo kala duwan si aad u dooran karto midka ku habboon baahiyahaaga iyo kuwa ku jira quraaraddaada, tusaale ahaan, koob nuugid, oo leh miisaan si ay u degaan, sabbayn ...
Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin cillado, sida kuwa ay leeyihiin jilicsanaan haddii ay ka samaysan yihiin galaas, sidaa darteed kuma habboona biyo -mareennada leh kalluunka waaweyn, ama dhibka akhrinta heerkulka maadaama aysan daruuri ahayn inay ku dhegan yihiin quraaradda quraaradda.
Shaashadda LCD -ka ayaa ah habka noocyadan heerkulbeeggu u muujiyaan heerkulka, sidoo kale loo yaqaan digital. Ka sokow shaashadda, oo ka baxda aquarium -ka, waxay heerkulka ku qaataan god ka samaysan gudaha biyaha, kaas oo ah mid ka mid ah siyaabaha ugu wax -ku -oolka badan ee aan ku heli doonno si aan u aragno heer -kulka biyaha.
Sidoo kale, badiyaa shaashadu aad bay u weyn tahay waxayna noo oggolaanaysaa inaan ku aragno tirooyinka jaleec fudud, oo bixisa fududeyn dheeraad ah.
Heerkulbeegga Gasea ...
Heerkulbeegyada dhijitaalka ah shaki kuma jiro ugu waxtarka badan marka ay timaaddo xakamaynta heerkulka biyaha ku jira quraaraddayada. Badankoodu waxay ka kooban yihiin bandhig muujinaya heerkulka, kaas oo la dhigo meel ka baxsan quraaradda, iyo dareere la geliyay gudaha (taasi waa sababta ay ugu fiicnaadeen cabbirka heerkulka, maadaama aysan saamayn kulaylka dibadda). Ikhtiyaar kale oo aad u xiiso badan oo moodooyinka qaarkood ay ku daraan waa qaylo -dhaan ka diga haddii heerkulka biyuhu kor u kaco ama aad u dhaco.
Kaliya laakiin waa taas waa kuwa ugu qaalisan liiska, iyo in qaarkood leeyihiin xadhig xoogaa gaagaaban oo gaaban, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad si fiican u eegto tilmaamaha ka hor intaadan iibsan.
Noocyada ugu caansan ee classics: heerkulbeegyada galaaska ayaa kuu oggolaanaya inaad cabbirto heerkulka biyaha habkii hore. Waxay badiyaa ku daraan koob nuugid ama waxay u qaabeysan yihiin ul si ay uga soo laalaadaan muraayadda una ilaashadaan qaabkooda toosan, taas oo sahlaysa in la arko heerkulka. Sidoo kale, aad bay u jaban yihiin.
Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin cillad weyn, jilicsanaantooda, sidaa darteed iyagu maahan ikhtiyaar lagu taliyey aquariums -ka leh kalluunka waaweyn ama dareemayaasha. Dhinaca kale, waxay u muuqdaan inay leeyihiin tirooyin aad u yar, kuwaas oo waxoogaa adkaan kara in la akhriyo.
Koobabka nuugista ayaa ka mid ah Hababka Ugu Sareeya Ee Loo Helo Heerkulbeegyada Kuleylka Tooska Ah. Waxay u muuqdaan inay yihiin moodallo aad u jaban oo ka samaysan muraayad, caag ama xitaa ka kooban falliiq fudud.
Inkasta oo la taaban karo oo deegaan, koobabka wax nuugiddu waxay leeyihiin cillad aad u muuqata, taasina waa inay si joogto ah u dhacaan, kaas oo noqon kara wax laga xumaado haddii ay tahay inaan hubinno heerkulka waqtiyo kala duwan oo maalintii ah.
Heerkulbeegga LCD 10 qaybood...
Heerkulbeegyada leh dhejiska Waxay u muuqdaan inay yihiin xarig dhejis ah oo fudud oo heerkulka biyaha lagu calaamadeeyay, laakiin dibadda la dhigay. Sidaan hore u sheegnay marka la eego heerkulbeegga LCD, aad bay u jaban yihiin, laakiin, si kastaba ha ahaatee, waa kuwo aan la isku haleyn karin waana inaan ka taxaddarnaa haddii aan qorraxda dhigno, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaysan siin heerkulka saxda ah ee biyuhu .
Ugu dambeyn, faa'ido kale ayaa la xiriirta hawlgalka heerkulbeegyadan, tan iyo waxay ka kooban yihiin tirooyin waaweyn oo beddela midabka maadaama heerkulka quraaradda uu kala duwan yahay (waxoogaa sida siddooyin niyadda). Marka la helo tirooyin waaweyn, way fududahay in la akhriyo.
Kuleyliyaha biyaha oo leh heerkulbeeg ku dhex jira
Ugu dambeyntiina, mid ka mid ah alaabooyinka ugu xiisaha badan ee aan ka heli doonno adduunka heerkulbeegga aarmiriyeyaasha waa kululeeyayaasha leh heerkulbeeg ku dhex-jira, kaas oo waxay noo oggol yihiin inaan hal dhagax ku dilno laba shimbirood: inaan biyaha kululeynno (wax muhiim u ah aquariums -ka oo leh kalluunka kulaylaha) iyo inaan cabbirno heerkulka si ay had iyo jeer u noqoto sida ay taabanayso.
Hal cillad oo ay soo bandhigaan, si kastaba ha ahaatee, ayaa ah in heerkulbeeggu uusan ogaan karin wax cillad ah oo kululeeyaha, maadaama, isagoo ah badeecad isku mid ah, haddii uu cillad leeyahay waxay saamayn kartaa kululeeyaha iyo heerkulbeegga labadaba.
Waa kuwee kiisaska lagu cabbiro heerkulbeegga quraaradda?
Horaan uga faalloonay taas haysashada heerkulbeegga ku jira quraaraddayada waa ku dhawaad ​​qasab, laakiin waxay noqotaa mid gebi ahaanba macquul ah xaaladaha soo socda:
In aquariums kulaylaha, oo ay tahay in biyaha la kululeeyo oo lagu hayo 22 ilaa 28 darajo, heerkulbeeggu waa qasab. Qaar ka mid ah moodooyinka ayaa xitaa leh heerkulka heerkulkaan, sidaas darteed waxaad ku arki kartaa isha qaawan haddii heerkulku sax yahay iyo in kale.
Al beddel biyaha quraaradda Heerkulbeeggu sidoo kale waa aalad lama huraan ah, maadaama uu nooga digi karo isbeddellada suurtogalka ah ee biyaha cusub. Kalluunku aad buu ugu nugul yahay isbeddelada heerkulka ee laga yaabo inay biyuhu yeeshaan, kuwaas oo aad ugu nugul markay fulinayaan isbeddelka biyaha.
Ugu dambayntii, heerkulbeeggu wuxuu kaloo u sameeyaa cajaa'ibyo kuu sheegaa haddii biyo -kululeeyaha uu soo gaaray cilad in laga yaabo inaadan dareemin. Taasi waa sababta aan u tilmaamnay inay tahay fikrad wanaagsan inaad haysato kululeeye iyo heerkulbeeg gooni ah, markaa waxaad hubsan doontaa inay labadoodu si madax bannaan u shaqeeyaan.
Sida si sax ah loogu dhigo heerkulbeegga quraaradda si ay u noqoto mid la isku hallayn karo
Jawaabta qaybtan waxay aad ugu xirnaan doontaa nooca heerkulbeegga aan isticmaaleyno, mar haddii mid walba uu leeyahay qaliin gooni ah. Tusaale ahaan:
ka heerkulbeegga dhejiska ayaa loo isticmaalaa in lagu meeleeyo meel ka baxsan quraaraddaSababtaas awgeed, waa in si taxaddar leh loo qaataa inaan si toos ah loo gelin qorraxda ama meel u dhow isha kuleylka ama hawo qabow (sida kuleylinta ama qaboojiyaha).
Sidoo kale, heerkulbeegyadan ayaa ah sax yar oo ku jira quraaradaha waaweyn, mar haddii lahaanshaha darbiyo dhumuc weyn aysan tilmaami karin heerkulka biyaha ee saxda ah.
ka Heerkulbeegyada gudaha waa in mar walba la dul saaraa quruuruxa dushiisa xagga hoose ee taangiga si aad u awooddo inaad si cad u aragto akhriska (oo si sax ah, dabcan).
Marka laga hadlayo a heerkulbeeg dul sabbaynaya, waa in la quusiyo si ay u bixiso akhrinta heerkulka saxda ah.
Haddii aad rabto inaad hubiso in heerkulbeegga koobka nuugiddu uusan soo bixin, ama aad haysato kalluun qallafsan oo si fudud u dhaqaajin kara, ku dar koob nuugid labaad si loo sugo.
Had iyo jeer isku day in heerkulbeegga, nooc kasta oo uu yahay, had iyo jeer ka fogow biyo kululeeyaha ee quraaradda, maadaama tani ay sidoo kale saamayn karto heerkulka ay diiwaangeliso.
Meelaha biyo -biyoodka aad u waaweyn, waxaad yeelan kartaa dhowr heerkulbeeg oo kala firidhsan agagaarka meesha si aad heerkulka u ilaaliso heerka ugu habboon ugana ilaaliso isbeddellada inay dhacaan.
Faa'iidada kale ee haysashada laba heerkulbeeg oo isla quraaradda ah waa taas wuxuu kuu oggolaanayaa inaad aragto haddii labada midkood ku guuldareysto waxaana jiray isbeddel heer -kulka biyaha.
Ugu dambeyn, waxaa muhiim ah in dhig heerkulbeegga meel aan khalkhalin kalluunka laakiin taasi waqti isku mid ah ayaa kuu oggolaanaysa inaad samayso akhrin hal jaleec ah.
Ha iloobin fiiri tilmaamaha heerkulbeeggaaga si loo hubiyo habka ugu wanaagsan ee loo adeegsado ugana faa’ideysto, maadaama moodel kasta uu ka duwan yahay.
Maxaa dhacaya haddii heerkulbeegga quraaradda jabo
Hadda ka hor, ayeeyooyinkeennu waxay heerkulkeenna ku qaateen heerkulbeegyo aad u qurux badan, oo ay ka buuxiyeen dareere lacag ah oo aad u qurux badan, laakiin aad u sun ah, meerkur. In kasta oo ay hadda dhif tahay ama xitaa gabi ahaanba mamnuuc tahay in meerkuri loo isticmaalo soo saarista heerkulbeegga, waxay noqon kartaa habka caadiga ah gaar ahaan moodooyinkii hore, waxaa muhiim ah inaad hubiso in heerkulbeegga aad adeegsan doontid uusan ka samaysan maaddadanHaddii kale, haddii ay jabto, waxay sumayn kartaa kalluunkaaga oo wasakhayn kartaa biyaha.
Nasiib wanaag heerkulbeegyada casriga ah laguma sameeyo meerkuriga, laakiin leh walxo kale oo sidoo kale u oggolaanaya akhrinta lagu kalsoonaan karo ee heerkulka, sida khamriga midabkiisu cas yahay. Haddii ay dhacdo in mid ka mid ah heerkulbeegyadan uu jabo, nasiib wanaag kalluunkaagu ma geli doono halis dhimasho, maadaama aalkolo aysan waxyeello lahayn.
Heerkulbeegga quraaradda waa lama huraan haddii aan dooneyno in heerkulka kuleylkeenna uusan isbeddelin. kalluunkeenuna waa caafimaad qabaa waana faraxsan yahay. Intaa waxaa dheer, waxaa jira noocyo aad u badan oo aan si dhib yar ku heli doonno mid aan ku habboonayn baahiyahayaga iyo kuwa kalluunkeenna. Noo sheeg, ma tijaabisay mid ka mid ah noocyada heerkulbeegga? Midkee door bida? Ma kula tahay inaan ka tagnay wax talo ah oo aan bixinno?
Fuentes Thesprucepets, Aquariadis
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » Heerkulbeegga Aquarium
Perlon loogu talagalay quraaradda